Inona no tokony hatao manoloana izao fampitondràna ny mangidy ny Malagasy izao?
Date: 12 février 2018 - 08:51
Tsy naniry an'izao ny malagasy raha nifidy Mpitondra.Tohina ny fò maheno ny habibiana etsy sy eroa, ny fahantràna,ny fidangan'ny vidim-piainana, ny loto sns...EFA TSY RARINY INTSONY, EFA TENA TSY RARINY INTSONY!!!
Tsy tokony hanongam-panjakàna izany aloha isika an.Efa miandry tataka fotsiny ny mpanararaotra, dia vao maika hivarina an-kady tanteraka ny firenena.
Vao mihetsika maneho hevitra koa anefa dia migadra, vao mihetsika dia emmoreg @ 4X4 sy camions, vao mihetsika dia maty.
Ny hevitra hitako:Andao hentanina HANANGANA SAINA FOTSY ISAN-TOKANTRANO NY OLONA @ andro anankiray.Tsisy resabe fa ady mangina.Tokony ho tsapan'ireo gaigilahy eo @ fitondràna ireo hoe AOKA IZAY FA RESY NY MALAGASY!
Re: Inona no tokony hatao manoloana izao fampitondràna ny mangidy ny Malagasy izao?
Date: 12 février 2018 - 09:20
ireto mpitandro filaminana sy fitsarana ireto mihitsy no tena tsisy ilavana azy, rehefa ny madinika haindry zareo no mampiatra ny lalàna
@ zao dia mbola mety averina "hono " ny concours na police t@ juillet 17 satria mbola tsy nivoaka h@ zao stria toa midrikina ny lehiben' ny police tsy manaiky ny kolikoly avy any @ vavy ambony
mitovitovy @ zay koa ny concours na douanes
izany moa ka aiza no tsy anjaka ny kolikoly
Date: 12 février 2018 - 09:27
ny mahagaga am ty tantara ity dia :
- saika olona solafaka very fihinanana no betaraina am fiainana ary manameloka ny fitondrana !!!
>> ny olona niasa sy tafita kosa dia tsy mametraka olana fa manohy tsara ny fiainany !!!
Date: 12 février 2018 - 11:24
belapin> "olona solafaka sy very fihinanana no be taraina".
Tsss Rehefa tsy miaina eto Gasikara dia aleo mangina.
Efa tena MIHATRA @ TAOLANA NY FANGIRIFIRIAN'NY MALAGASY:
Tsy hiresaka "insécurité" sy loto sy làlana simba... intsony aho, satria ireny efa HIGAGANA,
- Ny 4mis nisy hatrizay mba nihinana vary 1kap/10, lasa nitsindroka zôridira
- Ny mpiasa- mpanjakàna niaina t@ antonony taloha, lasa 4mis mihinana vary 1kap/10
- ireo olona mba nanana "moyens" nividy fiara kely, lasa namadika ny fiarany ho taxiville
- Ny mpiasa very asa nanomboka 2009, tsy maintsy mihinana, tsy maintsy mampiana-janaka, lasa nivarotra amoron-dàlana.
-Ny tambanivohitra sahirana noho ny ataon'ireo "collecteurs" lasa niakatra an-drenivohitra hivarotra amoron-dàlana,chauffeurs taxibe sns...
Fantatr'i belapin ve manao ahoana ny fahefa-mividin'ireo olona ireo @ zato vola raisina kely isam-bolana na isan'andro, manoloana ny fidangàn'ny fiainana aty Mskara?
Fantatr'i belapin ve ny vidin'ny vary izao? fantatr'i belapin ve fa 80 000Fmg/70 000fmg ny kilaon'ny henakisoa- 60 000fmg ny kilaon'ny henomby- 70 000fmg ny kilaon'ny trondro???20 000fmg ny tomates, 15 000fmg/20 000fmg ny kilaon'ny voankazo (poara-voaloboka...)Akondro avy aza izao no vidiana 10 000fmg ny kg?
Ny olona miasa marina tsy tafita eto izany.Mihondrana any am-pita izy vao mihatsara ny fari-piainany
Ny olona tafita eto:
- Mpitondra mpanao risoriso
- Généraux mpitari-tafika mandray tsolotra avy @ mpitondra
- Mpitsara sy Avocats mpanao risoriso
- Sinoa sy karana manana tranom-barotra sy orinasa lehibe
- Ireo vahiny miasa sy mipetraka eto Mada
Date: 12 février 2018 - 11:38
Mpiserana << lainga v ilay oe Madagasikara dia tany manankarena ?????
- an'iza ny hadisoana na ny havendranana raha lasa mahantra velona ny mponina ?
- sodé zavatra notediavina noho ny vokatry ny akamoana izao ????
- rhf tsy mihetsika anie ianao ny J-X dia mizotra miharatsy io ny J sy J+1, ... J+X !!!!
- mahagaga fa ny karana tsy tompon-tany indray no lasa mpanefoefo !!!
- ny gasy aleony makany ampita hitady ravin'antitra
- ny karana sy ny sinoa nefa faly ery nipetraka manorina orin'asa eto dago !!!!
- ny vary ny votabia,... miakatra be daholo hono dia tezitra v ny tambanivohitra sa ???
>> ntssss !!miverena any ambanivolo raha tsy tanty intsony ny fiainana ao am ville e !!!!
Date: 12 février 2018 - 12:20
Marina be, Mskara tany manankarena. Fa tsy nanasoavana ny sarambambem-bahoaka ny fitrandrahana azy fa nobakòn'olom-bitsy.
-ny fahadisoana dia an'ny mpitondra tsy nahay nitantana ny harem-pirenena fa mpangalatra sy tia tenairay trano.
- misy aloha ireo sarangan'olona kamo e nanantena fa rehefa tonga eo @ fitondràna ilaikely io dia hanaterany vola eo am-pandriana ,marivo salosana dia nentin'ny olona nanao "coup d'état" dia izao niafara @ fanjakàn'ny baroa izao. Zavatra notadiavina ny an'ireo saranga ireo t@ 2009.
-karana tsy tompon-tany fa "mpandoa écolage" no lasa mpanefoefo.
- Mankany am-pita satria na manam-pahaizana sy hiasa tahaka ny inona aza eto, rehefa tsy havana na naman'ny mpitondra, ministra... dia tsy mahazo rariny na @ fianarana na @ fitadiavana asa
- Faly ny karana sy ny sinoa satria SENDRA IZAY MPITONDRA VENDRANA MPIVAROTRA TANINDRAZANA
- Miakatra ny vidim-bokatra, ny mpanelanelana no faly mividy mora ny vokatra @ tantsaha, dia maka tombony avo 10 heny avy eo.
>> Ny hiverina any ambanivohitra tsy olana, satria ny tena manana risi-po, fa ahoana ny fitsaboana? ahoana ny fianaran'ny ankizy?.. Angaha misy niraharaha izay hampiasa ny volam-panjakàna tao @ Ministera hitsinjovana ny tambanivohitra t@izany, fa ny nanao tranobe ho an'ny Ministra sy ny forongony no nahamay!!!
Date: 12 février 2018 - 12:36
Mpiserana << tsy vitan'ny fitarainana intsony leroa zao fa mila mihetsika hoa e !!!
- ireo sinoa sy karana ireo anie ka tany am faritra lavitra no niantombohany eh !!!
- nahita hevitra tam fampianarana sy fitsabona ihany anefa ry zareo tamzany !!!
- zay nahavita trano be dia aleo azy ny azy fa ny anao banjinina zao !!!
>> minoa ahy ianao fa afaka 3 na 4 toana dia hisy vokatra ny ezakao !!!!!
Date: 12 février 2018 - 12:50
belapin> F'iza no milaza aminao fa tsy mandeha ny fiainan'i Mpiserana? F'iza no milaza aminao fa tsy misy vokany ny ezak'i Mpiserana?
Fa antra ireto mpiray rà ny tena dia manao soso-kevitra sy miady hevitra eto @ forum.
Heverinao fa tsy vaky moa ny fò maheno zazavavy kely 12 taona voaolana?
Heverinao tsy ontsa moa ny tena mahita ny mafy ady mividy mora na mitsindroka voankazo lò?
Heverinao tsy malahelo moa ny tena rehefa hangatahin'ny mpiara-belona vary 1 vilia hohanina sy vola fanampiana kely entina ampianarana ny zanany?
Ka na inona lazainao foana eo, TSY RARINY HO'AHO, ARY MBOLA HISY FARANY ITY FAMPITONDRANA MANGIDY NY VAHOAKA MALAGASY ATAON'NY NAMANAO SY NY FMç ity!!!
Date: 12 février 2018 - 13:25
Mpiserana << tsara zany raha mandeh ny fiainan' isé eto dago !!!!
- mba toroy ny ezaka nataon'ireo vahoaka hitan'isé fa sahirana fa tsy vitan'ny fahalelovana fotsiny !!!!
>> sa sao lasa mifaninana am isé dia very ny fihinanan'isé ?????
Tsy misy azo atao
Ny hany sisa azo ao atao dia ny fandehanana mifidy
Efao ny adidinao
entano ny mpiara(monina ny havana, ny namana mba handeha hifidy
Aza eritreretina ny hoe vato iray izay halatsakao dia tsy manova na inona na inona amin'ny voka-pifidianana
Fa ny eritreretina dia hoe : raha tsy hifidy toa anao daholo ny olona rehetra, dia mihena ny taux de participation, donc mahazo vahana ny ratsy.